नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आईपीएल खेल्न भारत जाँदै : एकदम एक्साइटेड छु | Ekhabar Nepal
खेल चैत्र १३ २०७४ ekhabarnepal
काठमाडौं । नेपाली खेलकुद क्षेत्र नेपाली क्रिकेटका कारण यतिबेला चर्चामा रहेको छ । एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको नेपाली क्रिकेटको चर्चासँगै आईपीएल खेल्न लागेका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सर्वत्र चर्चा छ ।
सन्दीप लामिछाने नेपालका युवा लेग स्पिनर हुन् । सन्दीप लामिछानेले सन् २०१६ देखि अहिलेसम्म नेपाली खेलक्षेत्र तताउन सफल भएका छन् ।सन् २०१६ मा बंगलादेशमा सम्पन्न आईसीसी यु–१९ विश्वकपमा ह्याट्रिक विकेट लिँदा होस् या आईपीएलमा आवद्ध भएपछि नै किन नहोस् । एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै जाँदा सन्दीपले त्यहीअनुसारको चर्चा पनि बटुल्न सफल भएका छन् ।
सन्दीप मंगलबार चर्चित इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल खेल्न भारत जाँदैछन् । २० लाख भारुमा दिल्ली डेयरडेभिल्समा आवद्ध सन्दीपले पत्रकारहरुसँग सोमबार गरेको कुराकानी :
ठूलो प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ ?
जति सिनियर दाईहरूले नेपाली क्रिकेटलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो, म त्यसका लागि धेरै आभारी छु । किनभने डिभिजन फाइभदेखि ओडीआई स्टाटससम्म ल्याउने कुरा कुनै ‘जोक’ होइन । उहाँहरूको जुन मेहनत छ त्यसलाई अवमुल्यन गर्न मिल्दैन । म राष्ट्रिय टिमको सदस्य हुँदा एकदम खुसी ठान्छु आफुलाई जहिलेपनि । र यो अहिलेको मैले पाएको प्लेटफर्म नेपाली टिमबाट खेल्दाको भन्दा फरक छ । म एकदम एक्साइटेड छु । एउटा नयाँ प्रतियोगितामा यो मेरो लागि नयाँ अध्याय हो । यहाँबाट धेरै कुरा सिकेर नेपाली क्रिकेटमा लागु गर्ने कोशिश गर्छु ।
तपाईँ आईपीएलका लागि दिल्लीमा आवद्ध भएपछि दिल्ली डेयरडेभिल्सले एकदमै फलो गरिरहेको छ, कत्तिको कुरा भईरहन्छ ?
सबैजनासँग बिस्तारै घुलमिल भईरहेको छ । कुरा भईरहेको छ । गेम प्लान पनि हुन्छ हाम्रो । जुन तरिकाले उहाँहरूले सहयोग देखाईरहनु भएको छ । चाहे पोस्ट गरेर होस् या म्यासेज गरेर होस् । यो एकदमै राम्रो हो ।
आईपीएलमा गएपछि के कुराले तपाईँको ड्रिम पूरा भएको जस्तो हुनेछ ?
यहाँदेखि आईपीएलसम्म पुगिन्जेलसम्म र त्यसपछि मेरो यात्रा सुरु हुन्छ । त्यो भिन्न तरिकाको हुन्छ । सुरुदेखि अन्तिमसम्म जुन कुरा म त्यहाँ सिक्छु त्यो नेपाली क्रिकेटको लागि राम्रो हुन्छ ।
आईपीएलको लागि तपाई दिल्ली गएपछि ट्रेनिङ सेडुअल केहिलेदेखि छ ?
म त्यहाँ गएपछि सुटिङ र मेडिकल टेष्ट छ । त्यसपछि २९ या ३० तारिखदेखि हामी प्राक्टिस सेसन सुरु गर्छौं ।
आईपीएलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सको अन्तिम एघारमा पर्ने अवसर मिल्छ कि मिल्दैन, कस्तो छ अवस्था ?
पहिलेदेखि नै यो प्रश्न उठिरहेको छ । मैले खेल्छु या खेल्न पाउँदिन भनेर । त्यहाँको अवस्था र जति पनि कुरा हुन्छ कुन खेलाडीलाई खेलाउने भन्ने कुरा त्यही सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । कोच र कप्तानले जुन योजना बनाउनुहुन्छ । त्यो मेरो लागि मान्य हुन्छ ।
दिल्ली डेयरडेभिल्समा आवद्ध हुनुअघि कुन टिमबाट खेल्छु जस्तो लागेको थियो ?
कुनै पनि पनि टिमबाट अवसर पाए राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो । सबै टिमहरूलाई फलो गरिरहेको हुन्थे । तर मुम्बई इन्डियन्सलाई चाँहि अरुलाई भन्दा अलि बढि फलो गर्थेँ । तर खुसी लाग्छ, दिल्लीको लागि प्रतिनिधित्व गर्दैछु यो सिजनमा । म नेपाली टिममा जति मेहनत गर्थेँ दिल्लीबाट खेल्दा पनि त्यतिनै मेहनत गर्छु ।
यो तपाईको लागि कति ठूलो अवसर हो जस्तो लाग्छ ?
म सँगसँगै पुरै नेपाली क्रिकेट टिम छ । म त्यहाँ जाँदा पनि त्यही महशुस हुन्छ । अष्ट्रेलिया जाँदा पनि म त्यही सोँचेर खेलिरहेको हुन्थेँ । म नेपालको लागि नै खेलिरहेको छु र अहिले पनि म त्यस्तै सोच्छु । म सय प्रतिशत दिएर खेल्नेछु । यो मेरो लागि ठूलो अवसर हो । हाम्रो टिममा हेड कोच हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट छ, खेलाडी छन् र विपक्षी टिमबाट पनि धेरै कुरा सिक्न मिल्छ र त्यो हाम्रो नेपाली क्रिकेटको लागि धेरै राम्रो कुरा हो ।
तपाईँको लागि आईपीएल अवसर हो की चुनौति ?
मेरो लागि हरेक कुरा अवसर हुन्छ । किनभने त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ सिक्ने । हाम्रै टिममा अब अमित मिश्र एउटा भेट्रान लेग स्पिनर भारतीय टिमको । उहाँले अहिलेसम्म आईपीएलमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिनुभएको छ । उहाँसँग जुन मैले अनुभव लिन मिल्छ त्यसकारण यो मेरो लागि अवसर हो ।
तपाईसँग त्यस्तो स्पेसल के छ, जुन कुराले निरन्तर अघि बढिरहनु भएको छ ?
म सबैभन्दा पहिले त नेपाली टिमको लागि खेलिरहेको छु । त्यसमा मलाई सबैभन्दा गर्व लाग्छ । सायद म नेपालको लागि नखेलेको भए म केहीपनि हुने थिइनँ होला । किनभने जतिपनि अवसर आयो अब हाम्रो दाईहरूसँग खेल्न र सिक्न पाएँ । त्यो कुराहरूलाई जहिले पनि म लागु गर्न खोज्छु । यसले गर्दा सधै राम्रो गरिरहुँ जस्तो लाग्छ । आफुले राम्रो गर्यो भने आफैलाई राम्रो हुन्छ र टिम पनि माथि पुग्छ । त्यसैले गर्दा होला ।
तपाईँले पाउनुभएको सफलताको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
म जहिले पनि राम्रो गर्न खोज्छु आफ्नोतर्फबाट । तर मैले मात्रै राम्रो गरेर टिमले जित्ने होइन । सबैको योगदान उतिकै हुन्छ । त्यही योगदानले गर्दा सायद मेरो ब्यक्तिगत प्रदर्शनमा पनि राम्रो भएको हुनुपर्छ । सबै क्रेडिट मेरो भन्दा पनि हाम्रो यु–१९ र सिनियर टिमका कोचदेखि व्यवस्थापन तथा खेलाडीलाई दिन्छु ।(बाह्रखरी)